Nleta 11 Cerebral Palsy Sikolas 2022
Akwụkwọ Ọmụmụ Akwụkwọ Ọhụụ Niile
Ulo akwukwo nke 11 Cerebral Palsy
N'ebe a, ị nwere ike ịchọta nkọwa gbasara agụmakwụkwọ na-arịa ọrịa ụbụrụ na otu ndị nwere nkwarụ a ga-esi nweta agụmakwụkwọ ndị a.
Enwere ọtụtụ mmadụ n'ụwa niile na-arịa otu ọrịa, ọrịa, ọrịa, ma ọ bụ nkwarụ, ma ọ bụ nke ọzọ na ndị a chọrọ nlebara anya pụrụ iche. Dịka ọmụmaatụ, ọtụtụ ndị nwere nkwarụ enweghị ike ịkwado onwe ha ma dabere na mmesapụ aka nke ọha na eze.
Ndị ọha na eze na-enyere ha aka site na ntọala ọrụ ebere na ụlọ ọrụ na onyinye ndị ọzọ iji nyere ha aka na mkpa ndị bụ isi. Mgbe ụfọdụ onyinye ndị a gafere idozi nsogbu ndị bụ isi ma gaa n'ihu iji nyere ha aka na mkpa ndị ọzọ dị ka agụmakwụkwọ maka ndị nwere mmasị inweta agụmakwụkwọ ka elu.
Na ọkwa a n'agbanyeghị, anyị agaghị ekwu maka mkpa ndị nwere nkwarụ ma ọ na-elekwasị anya na agụmakwụkwọ a kapịrị ọnụ maka ndị na-arịa ọrịa ụbụrụ.
Yabụ, ọ bụrụ na ị bụ onye nwere nkwarụ ụbụrụ ma ọ bụ mara na onye na-arịa ya ị kwesịrị igosi ha edemede a ka ọ ga-abara ha uru nke ukwuu.
E depụtara ndepụta nke agụmakwụkwọ na-arịa ọrịa ụbụrụ nke ọma n’isiokwu a, a na-ahaziri scholarships iji gbaa ndị nwere nkwarụ a ume. Ndi mmadu a, dika otutu ndi ozo ozo, nwere nro, ochicho, na ebumnuche nke ha onwe ha chokwara iru.
Site na nkuzi mmụta ụbụrụ nke ụbụrụ, ha nwere ike, n'otu ụzọ ma ọ bụ ọzọ, ịmalite ịmalite nrọ ha site na kọleji, mahadum, ma ọ bụ ụlọ ọrụ aka ọrụ. Ọzọkwa, ọ ga-ewelite mmụọ ha nke ukwuu na obodo, ọha mmadụ, yana ụwa n'ozuzu na-eche maka ha na ebumnuche ha na ndụ.
Ị nweghị nkwarụ a mana ị nwere ike ịchọrọ inyere onye nwere na-amaghịdị ka esi amata ha ma ọ bụ na-amaghị ihe ọ pụtara, Study Abroad Nations ikpuchiri gi.
Kedu ihe bụ Cerebral Palsy?
Ọrịa ụbụrụ bụ ọrịa na-eme ka mmadụ na-emegharị ahụ́, ụda akwara, ma ọ bụkwanụ otú ụbụrụ na-anaghị adịte aka. Ọgwụgwọ nwere ike inye aka mana ọnọdụ ahụ enweghị ike ịgwọta _sitere na Google
N'ihi ọrịa akwara a, mmegharị ha nwere ike ịdị ka ihe na-adịghị mma, ebe ụfọdụ nwere ike ịga ije n'adabereghị na ndị ọzọ iji oche ọlụsị.
Nwere ndị nwere ọrịa ụbụrụ na-aga mahadum?
Na-eche ma ndị ọrịa ụbụrụ na-arịa ọrịa ụbụrụ ha nwere ike ịga kọleji, mahadum, ma ọ bụ ụlọ akwụkwọ ọzụzụ? Ee! - azịza ya bụ Ee! - ha nwere ike ịga ụlọ ọrụ ọ bụla dị elu karịa nke ha họọrọ dịka onye ọ bụla ọzọ na-eme.
E gosiputala na ọrịa ụbụrụ anaghị emetụta ọgụgụ isi na ndị nwere nkwarụ nwere ike ịnwe IQ dịka mmadụ ọ bụla.
N’etughi oge ozo, ka anyi banye n’ime isi okwu. Nwere ezigbo ọgụgụ!
Ọrịa ụbụrụ nke ọrịa ụbụrụ
AmeriGlide Onye Ọzụzụ Nkuzi
BClọ Ọrụ ABC Iwu Ọrịa Palsy nke Afọ Ọchịchị
PO Postili Undergraduate Nkuzi
Ihe nkuzi nke ncheta John Lepping
Nkuzi Nkuzi nke Microsoft
The Charlotte W. Newcombe Foundation Sikolashị maka ụmụ akwụkwọ nwere nkwarụ
Ọmụmụ Ọrịa na-emerụ Ahụ Ọmụmụ Cerebral Palsy
Bryson Riesch Paralysis Foundation nkuzi
Akara nkuzi nke McBurney maka ụmụ akwụkwọ nwere nkwarụ
North Central Kiwanis Ncheta nkuzi nkuzi
Ihe ndị a bụ ndepụta na nkọwa nke agụmakwụkwọ na-arịa ọrịa ụbụrụ:
O. Postili Undergraduate Mmụta
AmeriGlide bụ ụlọ ọrụ na-ebunye ma kesaa ụdị ngwaahịa nnweta ụlọ ọ bụla dị ka igwe mbuli elu, oche nkwagharị, na ngwaahịa ndị ọzọ na-agagharị.
Companylọ ọrụ a - AmeriGlide - guzobere AmeriGlide Achiever Scholarship iji nye ụmụ akwụkwọ kọleji oge niile na-eji akwụkwọ ntuziaka ma ọ bụ oche nkwagharị ma ọ bụ skuuta ngagharị (ebe ọ bụ na ndị nwere nsogbu ụbụrụ na-eji ngwaọrụ a, ha onwe ha kwa nwere ike itinye akwụkwọ maka agụmakwụkwọ a). Nrite nke $ 2,500 ka a ga-enye onye na-arịọ arịrịọ iji kpuchie mmefu nke nkuzi na akwụkwọ.
Ọ bụrụ na ị nwere mmasị na agụmakwụkwọ a wee zute ihe ndị a chọrọ iji tozuo:
A ga-enyerịrị ndị na-achọ ọrụ dị ka ụmụ akwụkwọ dị elu ma ọ bụ ụmụ akwụkwọ gụsịrị akwụkwọ na kọleji mahadum dị afọ anọ ma ọ bụ abụọ na United States.
Ga-enwerịrị opekata mpe otu afọ nke ahụmịhe kọleji
A chọrọ GPA kacha nta nke 3.0
Ga-abụ nwa amaala nke United States ma ọ bụ jide akwụkwọ visa ụmụ akwụkwọ ziri ezi nke pụtara na ụmụ akwụkwọ mba ụwa nwere ike itinye akwụkwọ.
Ngwa zuru ezu ma nyefee nzaghachi maka ajụjụ edemede - "Ihe mgbaru ọsọ dị a doaa ka ị nwere maka ọrụ / ndụ gị, gịnị kpatara i ji nwee ihe mgbaru ọsọ ndị ahụ, gịnịkwa na-akpali gị iru ha?"
Tinye maka akwukwo a ebe a
Nke a bụ otu n'ime ihe mmụta ụbụrụ na-akpata afọ ofufo kwa afọ a na-enye onye ọ bụla na-achọ, na usoro nke ịmecha ma ọ bụ nweta agụmakwụkwọ ka elu na ụlọ ọrụ akwadoro na United States ma ọ bụ onye gụsịrị akwụkwọ ma ọ bụ nwa akwụkwọ na-agụghị akwụkwọ.
Iji tinye akwụkwọ maka akwụkwọ mmụta a, ị ga-emerịrị agụmakwụkwọ ahụ, nyefee transcript agụmakwụkwọ na edemede ihe karịrị akwụkwọ abụọ ederede, peeji nke otu aka na-akọwa etu ọnya ụbụrụ si emetụta gị.
INCIGHT bụ akwụkwọ agụmakwụkwọ maka ndị nwere nkwarụ na-eme ka ọ gafee otu n'ime agụmakwụkwọ na-arịa ọrịa ụbụrụ. Ndị na-enyocha akwụkwọ nwere mmasị ga-debanye aha na mahadum, mahadum, ma ọ bụ ụlọ ọrụ akaebe.
Iji ruo eruo maka onyinye onyinye nke $ 1,000 onye nyocha ga-achọpụta na ọrịa ụbụrụ ma ọ bụ nkwarụ ọzọ ma gosipụta ihe akaebe, bụrụ onye bi na Washington, Oregon, ma ọ bụ California. Ndị na-achọ ọrụ ga-egosipụtakwa arụmọrụ dị mma na agụmakwụkwọ maka obodo ha iji nweta agụmakwụkwọ a.
The Postiligraduate scholarship bụ otu n'ime ụbụrụ ọrịa ụbụrụ - ọ bụghị nke ọma - mana maka ndị akọwapụtara akwụkwọ gụnyere ụmụ akwụkwọ nwere nkwarụ. Yabụ, ọ bụrụ na nsogbu ụbụrụ na-ama gị aka, ị nwere ike itinye akwụkwọ maka agụmakwụkwọ a.
Uru akwukwo a bụ $ 4,000 a na-enye kwa afọ - emeghari maka ihe ruru afọ ise - nye ndị okenye ụlọ akwụkwọ sekọndrị 2-7 sitere na otu ndị akọwapụtara. Onye anamachọ ihe agha kwesiri inwe GPA pere mpe nke 3.0 n ’uzo 4.0 ma gosiputa nchoputa siri ike banyere akwukwo na akwukwo na sayensi.
Onye anamachọ ihe aghaghi enwerịrị agụụ siri ike ịchụso ọrụ injinia, injinịa kọmputa, ma ọ bụ sayensị kọmputa ma gosipụta mkpa ego. Naanị ndị bi na US tozuru oke itinye akwụkwọ.
Onu ogugu maka akwukwo akwukwo a bu $ 5,000 ma haziri ya maka umu akwukwo nwere ikike nke aru ma obu nke uche ndi choro iga n'ihu akwukwo na ulo akwukwo di elu. Ebe ọ bụ na nkwarụ ụbụrụ bụ nkwarụ nke metụtara anụ ahụ, ị ​​nwere ike itinye akwụkwọ maka agụmakwụkwọ a.
Naanị ụmụ akwụkwọ bi na NY, NJ, ma ọ bụ PA nwere ike itinye akwụkwọ maka agụmakwụkwọ.
Microsoft, nnukwu ụlọ ọrụ ọgbara ọhụrụ - na-echepụta akwụkwọ mmụta a iji nye ike ma mee ka ndị nwere nkwarụ nwee nke a gụnyekwara ndị nwere ọrịa ụbụrụ. Nke a na - eme ka Nkuzi mmuta nke Microsoft n’etiti ihe nchoputa nke oria nke nwere uru nke $ 5,000 rue afo ano.
A na-enye ndị gụsịrị akwụkwọ na kọleji nkwarụ ohere agụmakwụkwọ dị ka ọrịa ụbụrụ nke na-achọ ịga ụlọ akwụkwọ aka ọrụ ma ọ bụ agụmakwụkwọ ka ịchụso ọrụ na teknụzụ. Onye anamachọ ihe aghaghi inwe CGPA nke pere mpe nke 3.0 ma obu karie, gosiputa ikike ochichi na mkpa ego.
Akwụkwọ ndị ọzọ bụ edemede atọ, mmalite, usoro agụmakwụkwọ, na akwụkwọ ozi abụọ.
Ntọala a na-enye ego maka agụmakwụkwọ maka ụmụ akwụkwọ nwere nkwarụ dị ka ọrịa ụbụrụ, autism, isi, wdg. Agụmakwụkwọ ahụ gafere dịka otu n'ime palsy scholarships n'ihi na ndị nwere nkwarụ nwekwara ike itinye maka ya.
Onweghi inye onyinye nye umu akwukwo obula kama ha nyere ha kọleji na mahadum ndi ha na Newcombe Foundation.
Mahadum na kọleji jikọtara ọnụ bụ:
Mahadum Ndagwurugwu Delaware
Mahadum Penn State
Mahadum Ụlọ Nsọ
Mahadum Edinboro nke Pennsylvania
Mahadum Long Island dị na Brooklyn Campus
Nke a bụ otu n'ime ụbụrụ na-arịa ọrịa ụbụrụ nke ezubere maka naanị ụmụ akwụkwọ nwere nkwarụ a ma ọ bụghị agụmakwụkwọ nkwarụ izugbe dị ka ndị ọzọ dị n'elu.
Ihe omumu akwukwo bu $ 2,500 nyere nwa akwukwo edebanyere ma obu nabata ya na ulo akwukwo di elu - ulo akwukwo, mahadum, ma obu oru aka - na GPA nke 2.5 ma obu karie. Ndị tinyere akwụkwọ ga-egosikwa nchoputa nke ọrịa ụbụrụ.
Ndị nwere ọrịa ụbụrụ ma ọ bụ onye nwa ha nwere nkwarụ nwere ike itinye akwụkwọ maka agụmakwụkwọ a. Ọ bụ $ 2,000 na $ 4,000 agụmakwụkwọ enyere mmadụ abụọ na atọ n'ime ndị dị otú ahụ edebanyela aha ha ma ọ bụ ihe dị ka mmemme kọleji afọ anọ ma ọ bụ abụọ.
Onye anamachọ ihe agha gha inwe GPA nke pere mpe na ihe edemede nke okwu 2.5 ma obu ihe na - akachaghi ihe kpatara onye choro kwesiri inweta akwukwo akwukwo na akwukwo ndi ozo. Ndị ọkà mmụta ahụ dị na United States mana a ga-ebute ndị Wisconsin ụzọ.
Nke a bụ agụmakwụkwọ nkịtị maka ndị nwere otu ụdị nkwarụ ma ọ bụ nke ọzọ dị ka ọrịa mkpọnwụ nke ụbụrụ, na-eme ka ọ gafee dị ka otu n'ime agụmakwụkwọ ọrịa ụbụrụ. Nkụzi nkwarụ a bụ naanị ihe a na-akwụ ụgwọ na Mahadum Wisconsin-Madison, ya bụ, ụmụ akwụkwọ chọrọ itinye akwụkwọ maka agụmakwụkwọ a ga-enwerịrị ike na mmemme bachelor, nna ukwu, ma ọ bụ doctorate na mahadum.
Can nwere ike itinye akwụkwọ maka agụmakwụkwọ mgbe ị nwere nkwarụ a chọpụtara dị ka ọrịa ụbụrụ na afọ ikpeazụ gị n'ụlọ akwụkwọ sekọndrị ma chọọ ịdebanye aha na Mahadum Wisconsin-Madison. I nwekwara ike itinye akwụkwọ ma ọ bụrụ na ị debanyere aha na mahadum.
Akwụkwọ ndị ọzọ iji tinye akwụkwọ maka agụmakwụkwọ ahụ gụnyere akwụkwọ ozi abụọ na akwụkwọ agụmakwụkwọ nke gụsịrị akwụkwọ na mbụ. Ọ bụ oghe nye ma ụmụ akwụkwọ mba ụwa ma nke ụlọ.
Nke a bụ agụmakwụkwọ kwa afọ maka ndị nwere ọrịa ụbụrụ, ma ọ bụrụ na emechiri ya maka afọ ahụ ma ọ bụ na ị merie ya n’afọ a, ị nwere ike ịnwale ọzọ maka afọ ọzọ. Nkuzi akwukwo a diri ndi mmadu achoputara na oria ma debanye aha ha na ulo akwukwo, mahadum, ma obu ulo oru aka.
Ndị a bụ ọrịa mmụta nke ọrịa ụbụrụ nke ị nwere ike itinye maka iji nyere gị aka ma nyere aka ịkwụ ụgwọ ụgwọ ụlọ akwụkwọ kọleji ma ọ bụ mahadum.
Childrenmụaka nwere ọrịa mkpọnwụ ga - abịakwute ọtụtụ ihe isi ike n'ịga okenye, nnwere onwe, na ịpụ kọleji karịa ụmụaka dị iche iche.
Site na enweghi ike, enwere otutu mgbochi iji gafere, mana enwekwara akụ gụnyere enyemaka ego, ngwa enyemaka, ndị nkuzi, na ndị ọzọ nwere ike inyere mmadụ aka ịbanye kọleji ma nwee ọganiihu ebe ahụ
N'ịchọ inye aka n'ihu, anyị na Study Abroad Nations akwadola akụkọ a maka nghọta gị dị mfe yana otu ị ga-esi nweta ihe enyemaka ndị a ịbịakwute gị.
N'okwu a, agbanyeghị, ihe enyemaka ndị a dị n'ụdị agụmakwụkwọ ga-enyere gị aka site na kọleji ma ọ bụ mahadum ma ọ bụ ọzụzụ ọrụ aka iji nweta nka ịchọrọ mgbe niile n'agbanyeghị agbanyeghị nkwarụ gị.
Nkuzi mmuta nke Social Security - Nchoputa, Ngwa, na nkowa
Scholarshipslọ akwụkwọ Scholarship nke 13 maka ụmụ akwụkwọ nwere Autism
Ulo akwukwo akwukwo di elu nke 17 di iche; Paykwụ ụgwọ Kachasị elu
Ulo akwukwo nke 13 kacha elu maka umu akwukwo
Akwụkwọ Ọmụmụ Akwụkwọ Ọhụụ Niile Ọkachamara Nna-ukwu Postgraduate Scholarship Ndụmọdụ agụmakwụkwọ Na-amụ Nduzi ná Mba Ọzọ Jiri Ọmụmụ Ihe Na-amụ Ihe ná Mba Ọzọ Akwụkwọ sayensị United States
ọrịa ụbụrụagụmakwụkwọ maka ndị nwere nkwarụ
Previous Post:10 Top Degree Management Degree mmemme
Next Post:Usoro ọmụmụ mmekorita nke 9 n'efu
Pingback: Mmụta ọrịa na -adịghị ala ala nke 15 maka ụmụ akwụkwọ 2022